अदिति राव हैदरी र राधिका मदन लेहेंगामा हामीलाई वेडिंग फेसन गोल दिनुहोस् - PAMPEREDPEOPLENY.COM - फेसन
अदिति राव हैदरी वा राधिका मदन: कसको सुन्दर लेहंगा तपाईं आगामी विवाहको लागि छान्नुहुनेछ?
घर फेसन बलिउड अलमारी बलिउड वार्डरोब आयुषी अधौलिया द्वारा आयुषी अढौलिया | डिसेम्बर २,, २०२० मा
जब हामी विवाहको लागि एक आदर्श पोशाकको बारेमा कुरा गर्छौं, यो केवल र केवल डिजाइनर लेहेंगा हो जुन पहिले हाम्रो दिमागमा आउँदछ। लेहेन्गा र बलिउड डिभासको बारेमा कुरा गर्ने उनीहरूको फेसनल आउटिंग मार्फत प्रस्ताव गर्न प्रेरणाको बन्डल छ। आगामी विवाहको लागि, हामीसँग अदिति राव हैदरी र राधिका मदनको नवीनतम लेहेंगा छन् जसबाट गोलहरू लिन सकिन्छ। हालसालै, ती दुई महिलाहरु बिभिन्न घटनाहरुमा उपस्थित भए, जहाँ उनीहरूले सुन्दर लेहेंगालाको स्पोर्ट गरे।
अदिति र a्गीन रंगीन लेहेंगामा फक्र्यो भने, अर्कोतिर राधिका आफ्नो गुलाबी लेहेंगामा राजकुमारी जस्ता देखिन्। त्यसोभए आउनुहोस्, हामी उनलाई दुबै लेहेन्गालाई नियालेर हेरौं र यसलाई विवाहको फेशन गोलहरूको लागि डिकोड गरौं।
अदिति राव Hydari रंगीन Lehenga
अदिति राव हैदरी फुलकारी ब्लास्ट लेहेंगा, जो डिजाइनर जोडी सुकृति र आकृतिको लेबलबाट आएको हो। यो एक हल्का-खरानी फूले फ्लेर्ड लेहेंगा हो जुन बहु-हुडे पट्टि, भौगोलिक बान्की, र सिक्निनेड मिरर वर्क द्वारा उच्चारण गरिएको थियो। सनम रतन्सीले स्टाइल गरेकी उनले आस्तीन बिनाको मिलान गरिएको चोलीको साथ लेहेंडा बनाई र उनको एउटा काँधमा एक सरासर डुप्पट छोपे। अदितिले हरिया-मोतीको विस्तृत सुन टोन झुम्कीका साथ किशनदास एण्ड क। ले उनको पहुँचलाई सहज बनाइन्। अभिनेत्रीले उनको मध्य भागमा चिल्लो हाईलाइट गरिएको कपडा छोडिदिए र भरिएको ब्राउज, मस्कारा, सफा ब्लश, र रातो लिप टिन्टको साथ उनको लुकमा उत्साहित गरे।
राधिका मदन गुलाबी लेहेंगामा
राधिका मदन फाल्गुनी शेन पीकक इंडियाबाट आएको हल्का गुलाबी लेहेंगामा सजिएको थियो। उनको सुन्दर लेहेंगामा चाँदीको पन्नी र अफ-सेतो रेशम धागाहरूका बिभिन्न स्वरूपहरू थिए। उनी बिना आवरणमा मिल्दोजुल्दो समान ढाँचाको चोली लिएर उनको लेहेंगा टिम बनाई र नेट-फेब्रिक डुप्ट्टाले डट प्याटर्न र अलिकृत सीमाको साथ आफ्नो लुक पूरा गरिन्। अभिनेत्रीले उनको चाँदी र सुन टोन मang्ग टिक्का, झूमर झुम्का, चूलीहरू, र औंठीहरूको जोडीको साथ आफ्नो नक्कल उतारिन्। उनले कम ब्यानमा आफ्ना टायरहरू तानिन् र यसलाई राम्रो हरियो र सेतो सहायकले सजाइन्। तीव्र कन्टुरि filled भरिएको ब्राउज, कोहले आँखाहरू, गुलाबी आँखा छाया, हाइलाइट गाला, हड्डीहरू, र गुलाबी लिप शेड द्वारा चिनो गरी, उनको हेराईलाई माथि उठाइयो।
त्यसोभए, कसको लेहेन्गा तपाईं आगामी विवाहको लागि छान्नुहुनेछ? हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि टिप्पणी सेक्सनमा।
पिक क्रेडिट्स: सनम रतन्सी , राधिका मदन
पेशाब मा पुस कोशिका को लागी औषधि
भारतीय तेल छाला को लागी सबै भन्दा राम्रो जग
घरमा शान्तिको लागि विशाल सल्लाहहरू
व्यायाम घरमा छाती चाँडो गुमाउन
नाभीमा घी राख्ने फाइदा